04.10.20 Avyakt Bapdada Nepali Murli 29.03.86 Om Shanti Madhuban
डबल विदेशी बच्चाहरूसँग बापदादाको कुराकानी
आज बापदादाले चारैतिरका डबल विदेशी बच्चाहरूलाई वतनमा इमर्ज गरेर सबै बच्चाहरूको विशेषतालाई देखिरहनु भएको थियो किनकि सबै बच्चाहरू विशेष आत्मा हुन् तब त बाबाको बनेका छन् अर्थात् श्रेष्ठ भाग्यवान बनेका छन्। विशेष सबै छन्तर पनि नम्बरवार त भनिन्छ। त्यसैले आज बापदादाले डबल विदेशी बच्चाहरूलाई विशेष रूपले हेरिरहनु भएको थियो। थोरै समयमा चारैतिरका भिन्न-भिन्न रीतिथिति वा मान्यता हुँदाहुँदै पनि एक मान्यताको एकमतवाला बने। बापदादाले विशेष दुई विशेषताहरू अधिकांशमा देखिरहनु भएको छ। एक त स्नेहको सम्बन्धमा धेरै छिटो बाँधिएका छन्। स्नेहको सम्बन्धमा ईश्वरीय परिवारको बन्नमा, बाबाको बन्नमा राम्रो सहयोग दिएका छन्। त्यसैले एक स्नेहमा आउने विशेषता, दोस्रो त्यही स्नेहको कारणले परिवर्तन शक्तिलाई सजिलै प्राक्टिकलमा पनि ल्यायौ। स्व-परिवर्तन र साथ-साथै साथीहरूको परिवर्तनमा राम्रो लगनले अगाडि बढिरहेका छौ। त्यसैले स्नेहको शक्ति र परिवर्तन गर्ने शक्ति यी दुवै विशेषतालाई हिम्मतले धारण गरेर राम्रो सबूत देखाइरहेका छौ।
आज वतनमा बापदादाले आपसमा बच्चाहरूको विशेषता माथि कुराकानी गरिरहनु भएको थियो। अहिले यो वर्ष अव्यक्तको व्यक्तमा मिलन गर्ने सीजन भन वा मिलन मेला भन समाप्त भइरहेको छ, त्यसैले बापदादाले सबैको रिजल्टलाई हेरिरहनु भएको थियो। त्यसो त अव्यक्त रूपले अव्यक्त स्थितिले सदाको मिलन त हुन्छ नै र सदा रहनेछ। तर साकार रूपद्वारा मिलनको समय निश्चित गर्नु पर्ने हुन्छ र यसमा समयको सिमा राख्नु पर्ने हुन्छ। अव्यक्त रूपको मिलनमा समयको सिमा हुँदैन, जसले जति चाहन्छ त्यति मिलन मनाउन सक्छ। अव्यक्त शक्तिको अनुभूति गरेर स्वयंलाई र सेवालाई सदा अगाडि बढाउन सक्छौ। फेरि पनि निश्चित समय प्रमाण यो वर्षको यो सीजन समाप्त भइरहेको छ। तर समाप्त होइन सम्पन्न बनिरहेका छौ। मिल्नु अर्थात् समान बन्नु। समान बन्यौ नि। त्यसैले समाप्त होइन, सीजनको समय त समाप्त भइरहेको छ तर स्वयं समान र सम्पन्न बन्यौ त्यसैले बापदादाले चारैतिरका डबल विदेशी बच्चाहरूलाई वतनमा देखेर हर्षित भइरहनु भएको थियो किनकि साकारमा त कोही आउन सक्छन्, कोही आउन सक्दैनन् पनि त्यसैले आफ्ना फोटो वा पत्र पठाउँछन्। तर अव्यक्त रूपमा त बापदादाले चारैतिरका संगठनलाई सजिलै इमर्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यहाँ सबैलाई बोलायो भने फेरि पनि बस्न आदिको लागि सबै साधन चाहिन्छ। अव्यक्त वतनमा त यी स्थूल साधनको कुनै आवश्यकता हुँदैन। त्यहाँ त केवल डबल विदेशी त के सारा भारतका बच्चाहरू जम्मा गर्यौ भने पनि यस्तो लाग्छ मानौं बेहदको अव्यक्त वतन हो। त्यहाँ जतिसुकै लाख होऊन् फेरि पनि यस्तो लाग्छ मानौं सानो संगठन हो। तर आज वतनमा केवल डबल विदेशीहरूलाई इमर्ज गरिएको थियो।
बापदादाले देखिरहनु भएको थियो– भिन्न रीति-थिति हुँदाहुँदै पनि दृढ सङ्कल्पद्वारा प्रगति राम्रो गरेका छन्। अधिकांश उमंग-उत्साहमा चलिरहेका छन्। कोही कोही खेल देखाउने पनि हुन्छन् तर रिजल्टमा यो फरक देखियो– गएको वर्षसम्म अलमलमा परेका धेरै हुन्थे तर यो वर्षको रिजल्टमा कत्ति बच्चाहरू पहिला भन्दा मजबुत देखिएका छन्। कुनै-कुनै बापदादालाई खेल देखाउने बच्चा पनि देखिए। अलमलमा पर्नेले पनि खेल गर्छन् नि। त्यस समयको भिडियो निकालेर हेर्यौ भने तिमीहरूलाई बिलकुल ड्रामा जस्तो लाग्ने छ। तर पहिला भन्दा फरक छ। अहिले अनुभवी भएर गम्भीर पनि बनिरहेका छन्। त्यसैले यो रिजल्ट देखियो– पढाइले, प्यार र यादमा रहने उमंगले, भिन्न-भिन्न रीति-थिति तथा मान्यतालाई पनि सजिलै परिवर्तन गर्दो रहेछ। भारतवासीलाई परिवर्तन हुन सजिलो छ। देवताहरूलाई जानेका छन्, शास्त्रहरूको ज्ञानलाई जानेका छन् त्यसैले मान्यताहरू भारतवासीका लागि त्यति नयाँ हुँदैनन्। फेरि पनि सबै चारैतिरका बच्चाहरूमा यस्ता निश्चयबुद्धि, अटल, अचल आत्माहरू देखिए। यस्ता निश्चयबुद्धि भएकाहरू अरूलाई पनि निश्चयबुद्धि बनाउन नमुना बनेका छन्। प्रवृत्तिमा रहेर पनि शक्तिशाली संकल्पद्वारा दृष्टि, वृत्ति परिवर्तन गर्छन्। यस्ता पनि विशेष रत्न देखिए। कति यस्ता पनि बच्चाहरू छन् जो जतिसुकै आफ्नो रीति प्रमाण अल्पकालको साधनमा, अल्पकालको सुखमा मस्त थिए त्यस्ता पनि रात-दिनको परिवर्तनले राम्रो पुरुषार्थीको लाइनमा चलिरहेका छन्। चाहे धेरै मात्रामा नभए पनि फेरि पनि राम्रा छन्। जसरी बापदादाले एक झट्का (झाट्कु)को दृष्टान्त दिनुहुन्छ। त्यस्तै मनबाट त्यागको संकल्प गरिसकेपछि आँखा पनि नजाओस्, यस्ता पनि छन्। आज सबैको रिजल्ट हेरिरहनु भएको थियो। शक्तिशाली आत्माहरूलाई देखेर बापदादाले मुस्कुराउँदै कुराकानी गरिरहनु भएको थियो– ब्रह्माका रचना दुई प्रकारको रूपमा गायन गरिएको छ। एउटा ब्रह्माको मुखबाट ब्राह्माण निस्किए र अर्को रचना– ब्रह्माले संकल्पबाट सृष्टि रच्नुभयो। त्यसैले ब्रह्मा बाबाले कति समयदेखि श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प गर्नु भयो होला! हुन त बापदादा दुवै हुनुहुन्छ फेरि पनि रचनाको लागि शिवको रचना भनिँदैन। शिववंशी भनिन्छ। शिवकुमार शिवकुमारी भनिँदैन। ब्रह्माकुमार कुमारी भनिन्छ। त्यसैले ब्रह्माले विशेष श्रेष्ठ संकल्पले आह्वान गर्नु भयो अर्थात् रचना रच्नु भयो। त्यसैले यहाँ ब्रह्माको शक्तिशाली संकल्पले, आह्वानले साकारमा पुगेका हौ।
संकल्पको रचना पनि कम छैन। जस्तै संकल्प शक्तिशाली थियो त्यसैले त दूरबाट भिन्न पर्दा भित्रबाट बच्चाहरूलाई आफ्नो परिवारमा ल्याउनु भयो, श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्पले प्रेरित गरेर समीप ल्याउनु भयो तब त यो शक्तिशाली संकल्पको रचना पनि शक्तिशाली छ। कतिको अनुभव पनि छ, भन्छन्– बुद्धिलाई विशेष कसैले प्रेरित गरेर समीप ल्याइरहेको छ। ब्रह्माको शक्तिशाली संकल्पको कारणले ब्रह्माको चित्र देख्नासाथ चैतन्यताको अनुभव हुन्छ। चैतन्य सम्बन्धको अनुभवले अगाडि बढिरहेका छन्। बापदादा पनि रचनालाई देखेर हर्षित भइरहनु भएको छ। अझ अगाडि अरू पनि शक्तिशाली रचनाको प्रत्यक्ष सबूत दिइरहने छन्। डबल विदेशीहरूको सेवाको समयको हिसाबले अब बचपनको समय समाप्त भयो। अब अनुभवी बनेर अरूलाई पनि अचल अडोल बनाउने, अनुभव गराउने समय हो। अब खेल खेल्ने समय समाप्त भयो। अब सदा समर्थ बनेर निर्बल आत्माहरूलाई समर्थ बनाउँदै जाऊ। तिमीहरूमा निर्बलताको संस्कार भयो भने अरूलाई पनि निर्बल बनाउन सक्छौ। समय कम छ र रचना धेरै भन्दा धेरै आउनेवाला छन्। यति संख्यामा नै खुसी नहुनु– धेरै भए भनेर। अब त संख्या बढ्नु छ। तर जसरी तिमीहरूले यति समय पालना लियौ र जुन विधिले तिमीहरूले पालना लियौ अब त्यो परिवर्तन हुँदै जान्छ।
जसरी ५० वर्षको पालना लिएका गोल्डन जुबलीवालामा र सिल्वर जुबलीवालामा अन्तर रहेको छ नि। त्यसैगरी पछि आउनेहरूमा अन्तर हुँदै जान्छ। त्यसैले थोरै समयमा तिनीहरूलाई शक्तिशाली बनाउनु छ। स्वयं तिनीहरूको श्रेष्ठ भावना त हुन्छ नै। तर तिमीहरू सबैले पनि यस्तो थोरै समयमा अगाडि बढ्ने बच्चाहरूलाई आफ्नो सम्बन्ध र सम्पर्कको सहयोग दिनु नै छ, जसबाट तिनीहरूलाई सजिलै अगाडि बढ्ने उमंग र हिम्मत होस्। अब यस्तो सेवा धेरै हुनु छ। केवल आफ्नो लागि शक्ति जम्मा गर्ने समय छैन। आफ्नो साथ-साथै अरू प्रति पनि शक्ति यति जम्मा गर्नु छ जसबाट अरूलाई पनि सहयोग दिन सकियोस्। केवल सहयोग लिने होइन, दिनेवाला बन्नु छ। जसको दुई वर्ष भएको छ तिनीहरूको लागि दुई वर्ष पनि कम होइन। थोरै समयमा सबै अनुभव गर्नु छ। जसरी वृक्षमा देखाइएको छ नि– अन्तिममा आउने आत्माहरू पनि ४ अवस्थाबाट अवश्य पास हुन्छन्। चाहे १०-१२ जन्म पनि होस् वा जतिसुकै होस्। त्यसैले पछि आउनेहरूले पनि थोरै समयमा सर्वशक्तिको अनुभव गर्नु नै छ। विद्यार्थी जीवनको पनि र साथ-साथै सेवाधारीको पनि अनुभव गर्नु छ। सेवाधारीहरूले केवल कोर्स गराउने वा भाषण गर्ने होइन। सेवाधारी अर्थात् सदा उमंग-उत्साहको सहयोग दिनेहरू। शक्तिशाली बनाउने सहयोग दिनु छ। थोरै समयमा सबै विषय पास गर्नु छ। त्यति तीव्रगतिले गर्यौ भने तब न पुग्छौ, त्यसैले एक अर्काको सहयोगी बन्नु छ। एक अर्काको योगी बन्नु छैन। एक अर्कासँग योग लगाउनु छैन। सहयोगी आत्माले सदा सहयोगले बाबाको समीप र समान बनाइदिन्छन्। आफू समान होइन, बाबा समान बनाउनु छ। आफूसँग जुन पनि कमजोरी छन् तिनीहरूलाई यहीँ छोडर जानु। विदेशमा नलैजानु। शक्तिशाली आत्मा बनेर शक्तिशाली बनाउनु छ। यही विशेष दृढ संकल्प सदा स्मृतिमा होस्। अच्छा।
चारैतिरका सबै बच्चाहरूलाई विशेष स्नेह सम्पन्न याद-प्यार दिइरहनु भएको छ। सदा स्नेही सदा सहयोगी र शक्तिशाली यस्ता श्रेष्ठ आत्माहरूलाई बापदादाको याद-प्यार एवं नमस्ते। सबैलाई यो खुसी छ नि अनेक भएर पनि एकका बन्यौ। अब बेग्ला-बेग्लै मत छैन। एउटै ईश्वरीय मतमा चल्ने श्रेष्ठ आत्माहरू हौ। ब्राह्मणहरूको भाषा पनि एउटै छ। एक बाबाका हौ र बाबाको ज्ञान अरूलाई पनि दिएर सबैलाई एक बाबाको बनाउनु छ। कति ठूलो श्रेष्ठ परिवार छ। जहाँ जाऊ जुन पनि देशमा जाऊ यो नशा छ यो हाम्रो आफ्नो घर हो भन्ने। सेवा स्थान अर्थात् आफ्नो घर। यस्तो कोही पनि छैन, जसका यति धेरै घर छन्। यदि तिमीहरूसँग कसैले सोध्यो– तिमीहरूका परिचित कहाँ-कहाँ रहन्छन्? तब भन्नेछौ– सारा संसारमा छन्। जहाँ जाऊ आफ्नै परिवार छन्। कति बेहदका अधिकारी भयौ। सेवाधारी भयौ। सेवाधारी बन्नु अर्थात् अधिकारी बन्नु। यो बेहदको रूहानी खुसी छ? अहिले हरेक स्थानले आफ्नो शक्तिशाली स्थितिद्वारा विस्तारलाई प्राप्त गरिरहेका छन्। पहिला थोरै मेहनत लाग्छ। फेरि थोरै नमुना बनेपछि तिनीहरूलाई देखेर अरू पनि सजिलै अगाडि बढ्छन्।
बापदादाले सबै बच्चाहरूलाई यही श्रेष्ठ संकल्प बारम्बार स्मृति दिलाउनु हुन्छ– सदा स्वयं पनि याद र सेवाको उमंग-उत्साहमा रहनु, खुसी-खुसीले तीव्रगतिले अगाडि बढ्नु र अरूलाई पनि यस्तै उमंग-उत्साहले बढाउँदै रहनु। चारैतिरका जो साकारमा पुगेका छैनन् तिनीहरूको चित्र र पत्र सबै पुगेका छन्। सबैलाई प्रतिउत्तरमा पद्मापदम गुणा दिलदेखि याद-प्यार पनि दिइरहनु भएको छ। जति अहिले उमंग-उत्साह, खुसी छ त्यो भन्दा अझ पदमगुणा बढाऊ। कसै-कसैले आफ्ना कमजोरीका समाचार पनि लेखेका छन्। तिनीहरूको लागि बापदादाले भन्नुहुन्छ– लेख्यौ अर्थात् बाबालाई दियौ। दिएका चीजहरू फेरि आफ्नो पासमा रहन सक्दैन। कमजोरी दियौ त्यसैले अब संकल्पमा पनि नल्याउनु। तेस्रो कुरा– कहिल्यै पनि कुनै पनि स्वयंको संस्कार वा संगठनको संस्कार वा वायुमण्डलको हलचलले निराश नहुनु। सदा बाबालाई कम्बाइण्ड रूपमा अनुभव गरेर निराश हुनबाट शक्तिशाली बनेर अगाडि बढिरहनु छ। हिसाब-किताब चुक्ता भयो अर्थात् बोझ उत्रियो। खुसी-खुसीले पहिलाका बोझलाई भस्म गर्दै जाऊ। बापदादा सदा बच्चाहरूको सहयोगी हुनुहुन्छ। धेरै पनि नसोच। व्यर्थ सोचले पनि कमजोर गरिदिन्छ। जसको व्यर्थ संकल्प धेरै चल्छ तिनीहरूले दुई-चार पटक मुरली पढ। मनन गर्दै जाऊ, पढ्दै जाऊ। कुनै न कुनै प्वाइन्ट बुद्धिमा बस्छ। शुद्ध संकल्पका शक्तिहरू जम्मा गर्दै गयौ भने व्यर्थ खतम हुनेछ। बुझ्यौ?
बापदादाका विशेष प्रेरणाहरू
चारैतिर चाहे देश चाहे विदेशमा कत्ति यस्ता साना-साना स्थान छन् र अहिलेको समय प्रमाण साधारण छन् तर त्यहाँ विशेष बच्चाहरू छन्। यस्ता पनि कत्ति छन् जसले निमित्त बनेका बच्चाहरूलाई आफ्नो स्थानतिर चक्कर लगाउने आशा धेरै समयदेखि गरिरहेका छन्। तर आशा पूर्ण भइरहेको छैन। त्यो पनि बापदादाले आशा पूर्ण गर्दै हुनुहुन्छ। विशेष महारथी बच्चाहरूले योजना बनाएर चारैतिर जसले आशाको दीपक बनेर रहेका छन् त्यसलाई जगाउन जानु छ। आशाको दीपक जगाउनको लागि बापदादाले विशेष समय दिइरहनु भएको छ। सबै महारथी मिलेर भिन्न-भिन्न एरिया बाँडेर, गाउँका बच्चाहरू जोसँग समयको कारणले जान सकेका छैनन् तिनीहरूको आशा पूरा गर्नु छ। मुख्य स्थानमा त मुख्य कार्यक्रमको कारणले जान्छौ नै तर जुन स-साना स्थान छन् तिनीहरूको यथाशक्ति कार्यक्रम नै ठूलो कार्यक्रम हो। तिनीहरूको भावना नै सबैभन्दा ठूलो कार्यक्रम हो। बापदादाको पासमा यस्ता कति बच्चाहरूका धेरै समयदेखिका निवेदनहरू फाइलमा थन्किरहेका छन्। यो फाइल पनि बापदादाले पूरा गर्न चाहनुहुन्छ। महारथी बच्चाहरूलाई चक्रवर्ती बन्ने विशेष मौका दिइरहनु भएको छ। फेरि यस्तो नभन्नु सबै ठाउँमा दादी जानुहुन्छ। होइन, यदि एउटै दादी सबै तिर जाने हो भने फेरि त ५ वर्ष लाग्नेछ। फेरि ५ वर्ष बापदादा आउनु भएन भने मञ्जुर छ? बापदादाको सीजन यहाँ होस् र दादी चक्कर लगाउन गइन भने यो पनि राम्रो लाग्दैन त्यसैले महारथीहरूले कार्यक्रम बनाउनु। जहाँ कोही पनि गएको छैन त्यहाँ जाने कार्यक्रम बनाउनु र विशेष यो वर्ष जहाँ गए पनि एक दिन बाहिरको सेवा र एक दिन ब्राह्मणहरूको तपस्याको कार्यक्रम– यी दुवै कार्यक्रम अवश्य हुन्। केवल कार्यक्रममा गएर दौडधुप गरेर आउनु छैन। जति हुन सक्छ यस्तो कार्यक्रम बनाऊ जसमा ब्राह्मणहरूलाई पनि रिफ्रेशमेन्ट होस् र साथ-साथै यस्तो कार्यक्रम होस् जसबाट भी. आई. पी. हरूको पनि सम्पर्क होस् तर छोटो कार्यक्रम होस्। पहिलादेखि नै यस्तो कार्यक्रम बनाउनु जसमा ब्राह्मणहरूलाई पनि विशेष उमंग-उत्साहको शक्ति मिलोस्। निर्विघ्न बन्ने हिम्मत उल्लास भरियोस्। त्यसैले चारैतिरको चक्करको कार्यक्रम बनाउनको लागि पनि विशेष समय दिइएको छ किनकि समय प्रमाण परिस्थिति पनि बदलिरहेको छ र बदलिदै जाने पनि छ। त्यसैले फाइललाई खतम गर्नु छ। अच्छा।
रूहानियतको श्रेष्ठ स्थितिद्वारा वातावरणलाई रूहानी बनाउने सहज पुरुषार्थी भव
रूहानियतको स्थितिद्वारा आफ्नो सेवाकेन्द्रको यस्तो रूहानी वातावरण बनाऊ जसबाट स्वयंको र आउने आत्माहरूको सजिलै उन्नति हुन् सकोस् किनकि जति पनि बाहिरको वातावरणबाट थाकेर आएका हुन्छन् तिनीहरूलाई थप सहयोगको आवश्यकता हुन्छ त्यसैले तिनीहरूलाई रूहानी वायुमण्डलको सहयोग देऊ। सहज पुरुषार्थी बन र बनाऊ। हरेक आउने आत्माले अनुभव गरून्– यो स्थान सजिलै उन्नति प्राप्त गर्ने स्थान हो।
वरदानी बनेर शुभ भावना र शुभ कामनाको वरदान दिंदै गर।